Iifoto zabafana abaneminyaka eli-16 ukuya kweli-17 ubudala. Ndingabona phi eyona intle? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Iifoto zabafana abahle be-16-17 iminyaka. Ndingabona phi eyona intle?
Ngubani lo mfo? Ndingasifumana phi ifoto yakhe? Enkosi kwangaphambili!
Ayisoloko njalo ukuba imfashini iyatshintsha, kuya kufuneka utshintshe nayo .. Kananjalo, ayingawo onke amantombazana afana nabafana befashoni, kodwa nantsi imifanekiso
Ngokoluvo lwam, umzimba olungileyo wepumu uhlala ukhona kwaye uya kuhlala kwifashoni ..
Njengokhetho lokukhangela iifoto ndiza kukubonelela inethiwekhi yoluntu quot; VKontaktequot ;. Apho unokuchaza ngokucacileyo iminyaka yobudala efanelekileyo yokukhangela. Kulungile, ke ngumcimbi wetekhnoloji) yokukhangela iiprofayili kwiziphumo zokukhangela, ndicinga ukuba uya kufumana iifoto ezininzi ozithandayo.
Uphi eYandex kwiGoogle opera kwaye naphi na kuyo nayiphi na indawo yenethiwekhi yoluntu.
Kwaye inyani yokuba ngoku babonise andiyi kuthi ukuba ngabona bafana banobuqili kuba bengabantu basetyhini ngokoluvo lwam kwaye bangangabo bafazi baneenwele ezilinganayo eziphantse zahlaba iindlebe kunye nemilebe ezindlebeni, ngokubanzi abantu basetyhini bake babamba ngokwahlukeneyo.
Inkwenkwe efoto kumbuzo wakho ayifani nenkwenkwe, ngokuqinisekileyo intle kwaye ikhanya, kodwa ngokoluvo lwam, ikhanya kakhulu. Njengoko besitsho, ukunambitha kunye nombala, kwiminyaka eli-16 ukuya kwengama-17 ndandiwathanda kakhulu amakhwenkwe anobukrwada, kuhle, umzekelo, njengakwiifoto.
Zininzi iisayithi kwi-Intanethi apho ungabona khona iifoto zabafana abaneminyaka eli-16 ukuya kweli-17 ubudala.
Amantombazana, ngaphandle kweenethiwekhi zentlalo iVkontakte kunye ne-Instagram, bahlala behlala kwiindawo ezinjalo, bejonga abafana abancinci.
Bukela abafana abatsha abahle apha okanye apha.
Indoda eqhelekileyo ayiyi jonga iifoto zabafana abalungileyo Iminyaka eli-16 ukuya kweli-17. Oku kwenziwa ngamantombazana aneminyaka eli-14 ukuya kweli-15, ehlala ekhangela i-VKontakte ekukhangelo kwezona zintle zintokazi zibona iifoto zazo. Ke ke xelela intombi yakho, le ifoto yamadoda amahle aneminyaka eli-16 ukuya kweli-17 ubudala.
Ndicinga ukuba amantombazana amancinci kakhulu angenza umahluko omkhulu ukujonga amakhwenkwe aneminyaka eli-16 ukuya kweli-17, okanye kwindoda eneminyaka engama-23 ubudala, njengakwifoto ezingezantsi:
Kwaye ukuba amanenekazi amancinci afuna ukuncwina ngomntu kwaye asule iinyembezi emehlweni abo ngokungakhathali, ezi foto ziya kuba luncedo kakhulu ...
Kubonakala kum ukuba besebancinci, amakhwenkwe namantombazana alungile, kuba eli lixesha lokuba baguquke babe ngamadada amabi babe ngamalike amahle.
Ngokoluvo lwam, amakhwenkwe asemzini mahle:
I-Chantr canterbury (ngoku uneminyaka eli-16):
UGattlin Griffith (Iminyaka eli-16)
Kwaye ukuthelekisa, ishishini kunye nabantu abadala
Asa Ibhotile (Iminyaka eli-17)
Ndicinga ukuba amantombazana amaninzi ayathanda ukujonga iifoto zamakhwenkwe amahle okanye amakhwenkwe. Kuba bonke bafuna ukuba ngamnye kubo abe nomntu okhetheke kakhulu, kodwa njengoko uyazi, amantombazana ali-10 anabafana abayi-9, kubo kukho isibini esihle, kwaye abanye banjalo. Ke iyasala kula mantombazana angazange afumane bafana bahle ukuba ajonge iifoto zabasemzini kwaye aphuphe malunga nokuba indoda entle kangaka ye-nanny ayiveli :)
Ke, sithandwa sam, ndifuna ukukubonelela ngeefoto ezimbalwa zezona zindulule kakhulu nezona zintle kakhulu ukusuka kwiminyaka eli-16 ukuya kweli-17. Ndiyathemba ukuba uyonwabele kakhulu; )
PS Mhlawumbi lo mfo uza kuphinda athandwe ngumntu, m?
exhonyiweyo isitayela nobuhle
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,476.